Faah Faahin ka soo baxeyso Xildhibaan lagu dilay Kismaayo. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Faah Faahin ka soo baxeyso Xildhibaan lagu dilay Kismaayo.
October 19, 2017	464 Views
Kismaayo-KNN-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxayo dilka Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cabdi Xakiin Jaamac Cumar “Tima Farasle” oo ka tirsanaa Baarlamaanka Maamulka Jubbaland kaas oo xalay Fiidkii hore lagu dilay Kismaayo.
Goob joogayaal ayaa Idaacadda Kulmiye u xaqiijiyay in Marxuumka ay toogteen Labo nin oo hubeysan kuwaas oo dilka ka dib la sheegay si Cabsi la’aan ah in ay magaalada u dhaxmareyn mana jirto wax dadaal oo ay Samaayeen Laamaha amaanka Jubbaland.
Ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Kismaayo ayaa KNN u xaqiijiyay in Marxuumka la dilay loo maleynayo in dilkiisa aysan ka danbeyn Al-Shabaab balse lagu tuhmaayo in uu salka ku haayo muran dhinaca Dhulka oo maalmihii la soo dhaafay ka dhex taagnaa Xildhibaanka iyo Saraakiil kale.
Laamaha amaanka Jubbaland oo aan la hadalnay ayaa ka gaabsaday in ay Faah Faahin ka bixiyaan dilkaasi, balse Shacabka Kismaayo ayaa kuu sheegayo in dilka Xildhibaan Tima Farasle uu salka ku haayo muran dhinaca Dhulka oo maalmihii la soo dhaafay ka dhex taagnaa Marxuumka iyo Xubno kale oo ka tirsan Jubbaland.
Wararka kale oo dheeraad ah oo aan ka helnay Kismaayo ayaa xaqiijinaya in Marxuumka uu dilkiisa geesaty nin ku libisan dareeska Ciidanka Nabad Sugidda Jubbaland kadibna goobta ka baxsaday.
Waa markii ugu horeysay oo Bartamaha Kismaayo lagu toogto Xildhibaan ka tirsan Jubbaland ama Mas’uul xil Culus ka haayo Maamulkaasi.
Previous: Somalian president vows revenge against al-Shabaab after deadly blast.
Next: DHAGEYSO-:Dhaawacyadii loo qaaday Suudaan oo la dhigay Isbtaalo aan tayadooda Wanaagsaneen.